वर्णन मिडिया सुन नीक्षेप बैंकलाइ त फाइदा ग्राहकलाई के ? - वर्णन मिडिया
सुन नीक्षेप बैंकलाइ त फाइदा ग्राहकलाई के ?
२३-साउन-२०७६ | ११:५७:१६ am
अहिलेसम्म सुनलाई बैकमा जमानतको रुपमा राख्न सकिन्थ्यो तर नगद जस्तो जम्मा गरेर व्याज लिन पनि पाइदैनथ्यो । सुनलाई बैंकमा नगद जस्तै निक्षेपको रुपमा राख्न पाइने दिन नजिक आउँदैछ। आर्थिक बर्ष ०७६।७७ को बजेटमा उक्त कुरा उल्लेख भइसकेको छ। र, मौद्रिक नीति पनि त्यसरी नै आइसकेको छ।
सुनलाई निक्षेपकारुपमा स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्न बाँकी छ। त्यसैले, यस्को कार्यबिधि कस्तो होला भनेर धेरैले उत्सुक्ताका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पर्खिरहेका छन्।
सबैलाई थाहै छ, बैंकहरुले सुन धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले करिव ३८ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा सुनचाँदी धितो लिएर प्रवाह गरिसकेका छन्। यस्तो कर्जामा बाणिज्य बैंकहरुको मार्केट शेयर करिव ८३ प्रतिशत छ। २०७६ साल जेठ मसान्तसम्मको तल उल्लेखित तथ्यांकले त्यस्तै देखाउँदछः
सुनलाई बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्नु भनेको उक्त सुनलाई मौद्रिकीकरण गर्नु हो । यसबाट बजारमा तरलता बढ्न जान्छ । हालको व्यवस्था अन्तर्गत नेपाली नागरिकहरूले नेपालमा काँचो सुन ९सुनका बिस्कुट, टुक्रा सुन आदि० किन्न पाउँदैनन् । किनभने सुन आयात तथा विक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ मा व्यवसायीलाई मात्र विक्री गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । साथै उक्त कार्यविधिमा बैंकहरूले मात्र आयात गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले नागरिक आफैले सुन आयात गर्न पाउँदैनन् । बैंकहरूले आयात गरेको सुनलाई सुनचाँदी व्यवसायी संघहरूको सिफारिशमा सुनका गरगहना निर्माण गर्ने व्यवसायीहरूलाई मात्र विक्री गरिन्छ । तर, अपवादके रूपमा आव २०७५र७६ को बजेट आउनुभन्दा अघि विदेशबाट आउनेले सुनका बिस्कुट ल्याउन पाउँथे ।
नेपाली नागरिकसँग भएको काँचो सुन तथा सुनका गरगहनालाई बैंकमा लगेर जम्मा गर्ने र त्यसबाट ब्याज आर्जन गर्न सक्छन् । यसका लागि बैंकले पनि उक्त सुनलाई लगानी गरी ब्याज प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन जान्छ । सुनलाई मौद्रिक बनाएर बैंकले लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छब।
यो प्रावधानले वैंकलाइ त फाइदा होला तर ग्राहकलाई फाइदा के हो बुझ्न कठीन छ । सुनलाई नगद दुकान मै बेचेपनि बनाउन सकिन्छ । बैंक मै जान किन पर्यो ?
यदि सुन नीक्षेप राख्ने हो भने ग्राहकले सुन मुल्य बढेमा त्यसै अनुरुप रकम पाउने र घटेमा घटे अनुसार नै रकम पाउने हो भने यो ठिक छ । अन्यथा ग्राहकलाई यो फाइदा जनक छ ।
बैंकको ठूलो रकम ह्याक गर्ने विदेशी गिरोहलाई नेपाली एजेन्टको सहारा